Furan Movilforum: waxa ay ahayd iyo waxa ay u ahayd | Golaha Moobaylka
Furan Movilforum: waxay ahayd iyo waxay u ahayd
Magaca Open Movilforum, waana wax iska caadi ah, in kasta oo maanta qorshahani aanu sii jirin. Open Movilforum wuxuu ahaa hindisaha Telefónica iyo Movistar ee abuuritaanka jaaliyad furan oo ku wajahan shirkadaha tiknoolajiyada yaryar, horumariyayaal xirfadlayaal ah iyo bilow. Goorma ayaa la siidaayay? Maxaa loogu talagalay? Aan aragno xiga.
1 Muxuu ahaa Furan Movilforum
2 Goorma ayuu dhashay Open Movilforum?
3 Muxuu ahaa Open Movilforum?
4 Furan Movilforum, oo ah adeeg horudhac ah wakhtigaas
5 Furan Movilforum iyo Web 2.0
6 Open Movilforum APIs: API 1.0 iyo API 2.0
Muxuu ahaa Furan Movilforum
Websaydhka Furan Movilforum, oo ah hindise ay abuureen Telefónica iyo Movistar 2007, ayaa ahaa bulshada furan si loo caawiyo shirkadaha tikniyoolajiyadda yar yar, kuwa xirfadda u leh horumarinta barnaamijyada iyo bilowga, abuurista iyo horumarinta mashups iyo xalka dhaqdhaqaaqa ku saleysan isticmaalka aaladaha il furan.
Si kale haddii loo dhigo, waxaa loo abuuray iyada oo looga dan leeyahay kor u qaadista iyo fududeynta wada shaqeynta ka dhexeysa wadaha, farsamada SMEs iyo ganacsatada. Iyada oo Open Movilforum ayaa loogu talagalay bixiyaan macluumaad, qalab iyo isdhaafsi loogu talagalay abuurista barnaamijyada moobiilka. Waqtigaas, waxay ahayd dadaalkii ugu horreeyay ee Spain ka socota hawl wadeenka mobilada oo diirada saaraya barnaamijyada furan
Abuuritaanka barnaamijyadan cusub ee dhaqdhaqaaqa ayaa u oggolaaday is-dhexgalka isgaarsiinta moobiilka ee internetka. Bogga Furan 'Movilforum' waxaan ka helnay API-yada, SDKs, dukumintiyada, wiki iyo casharro muhiim u ah hirgelinta mashruuca.
Boggan Waxay sidoo kale noqotay gole wada hadal iyo isgaarsiin. xubnaha bulshada ee kooxda taageerada Telefónica.
Goorma ayuu dhashay Open Movilforum?
Open Movilforum ayaa laga bilaabay gudaha 2007 by Movistar oo kaashanaysa soo saaraha Nokia iyo mashruucaaga MadashaNokia, oo sidaas ku dhammaystiraya dalabkii soo-saaraha kan tiro badan oo dhex-dhexaad ah iyo qalabyo jira.
Movistar wuxuu ku soo bandhigay Open Movilforum xafladii Campus (Valencia, Julaay 23-29, 2007). Isla maalmahaas, Movistar wuxuu wacay tartankii bilaashka ahaa ee Mobile-ka ee loo yaqaan 'Open Mobileforum', oo loogu talagalay codsigii ugu fiicnaa ee Mobile 2.0 oo leh Nokia N800 terminal oo leh Linux iyo Wifi.
Bulshada Open Movilforum waxay ku lahaayeen kanaal furan Boqortooyada Midowday, O2 Litmus bulshada horumariye, kana socota shirkadda mobilada Telefónica O2. Telefónica ayaa la bilaabay Madal Horumariyaha Movistar taasi oo ku dhalatay xirfad caalami ah, laga bilaabo wadaag, wada shaqeyn iyo iskaashi, taasna waxaa lagu nafaqeeyey khibrado hore oo Telefónica ay kala kulantay suuqyo kala duwan sida Spain iyo Boqortooyada Ingiriiska
Muxuu ahaa Open Movilforum?
Iyadoo loo marayo websaydhka furan.movilforum.com Isdhexgalka adeegga moobiilka cusub waxaa lagu tijaabin karaa kuwa wax soo saara ee saddexaad ka hor xitaa ka hor intaan la bilaabin ganacsiga. Si kale haddii loo dhigo, bulshada ka samaysay degelkan waxay marin u heli karaan noocyada qalabka iyo faa'iidooyinka ay bixiso Telefónica.
Hindisaha Open Movilforum wuxuu ku saabsanaa fududee horumarinta barnaamijyada barnaamijyada furan bixinta APIs fudud, qalab iyo macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan hawlgalka mobilada. Intaa waxaa sii dheer, habka bixinta iyo tijaabinta ayaa si weyn loo fududeeyay labadaba barnaamijyada ku dhex jira aaladaha iyo kuwa isticmaalaya adeegyada Telefónica ee shabakada.
Furan Movilforum, oo ah adeeg horudhac ah wakhtigaas
Furan Movilforum wuxuu ahaa Hindisaha ugu horreeya ee bilaashka ah ee barnaamijka u dallacsiiyay shaqaale Isbaanish ah. Wixii loogu talo galay waxay ahayd in la wada gaaro SMEs. Taasi waa, awood siiyaan xalka dhaqdhaqaaqa in waqtigaas loo arkay wax aad qaali u ah, oo dhib badan oo aan la garanayn.
Adeeggan, waxaa suurtagal ahayd in la siiyo shirkado tiknoolajiyad yar, xirfadlayaal horumariya barnaamijyo furfuran iyo bilowyo jawi sahlay horumarinta barnaamijyada barnaamijyada furan. Tani waxay ahayd hindise aad u horumarsan, maadaama aan horey loogu sameynin Isbaanish shirkad mobiil.
Furan Movilforum iyo Web 2.0
Adeegga waxaa lagu qaabeeyey istiraatiijiyadda Web 2.0 ee Telefónica. Ka socota degelkeeda (open.movilforum.com) APIs fudud, qalab, iyo macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sida mobiladu u shaqeeyaan ayaa la soo bandhigay. Intaa waxaa dheer, qalab ayaa la bixiyay oo fududeeyay habka bixinta iyo baaritaanka labadaba barnaamijyada ku dhex jira aaladaha iyo kuwa isticmaala adeegyada shabakadda Telefónica.
Open Movilforum waxay ahayd jawi furan oo xubnaha bulshada oo dhami ay ku dari karaan mashaariicdooda. API-yada ayaa u kordhay sidii Telefónica xubnahooduna waxay ku darsadeen websaydhka. Waxaan ula jeedaa, waxay ahayd adeeg u dhaqmay sida oo kale kaydka maxaa lagu sameyn jiray mashups.
Open Movilforum APIs: API 1.0 iyo API 2.0
Open Movilforum wuxuu ku bilaabay API 1.0, Ka faa'iideysiga adeegyada ay bixiso Movistar iyo taxane SDKs ah oo u oggolaaday isticmaalka barnaamijyada 'APIs' barnaamij ahaan. Kuwani APIs-kii ugu horreeyay waxay oggolaadeen helitaanka tiro badan oo ah farsamooyinka kala duwan:
Ku helitaanka SMS-ka boostada (pop3): loo oggol yahay inuu leexiyo oo ku helo emaylladaas farriimaha gaagaaban (SMS) ee loo diro lambarka taleefanka Movistar.
Udiraya SMS: loo oggolaaday dirista SMS-ka iyada oo loo marayo interface interface.
Diritaanka MMS: loo oggol yahay in lagu diro MMS iyada oo loo marayo interface interface.
SMS 2.0: Waxqabadka IM iyada oo loo marayo SMS (liiska asxaabta, xaaladda joogitaanka, dirista farriimaha qadka, helitaanka markay isku xiran yihiin)
Kopiagenda: Waxay kuu ogolaatay inaad ka hesho liiska xiriiriyahaaga SIM-ga iyada oo loo marayo interface interface.
Soo dhaweynta wicitaanka fiidiyowga (oo ku saleysan SIP, nooca beta): loo oggol yahay in lagu soo waco wicitaannada kombuyuutarka oo lagu kaydiyo qulqulka maqal iyo muuqaal ah.
Auto Wap Riix: Waxay u ogolaatay fariimaha Wap Push in si iskood ah loogu diro boosteejada mobilada iyada oo loo marayo interface http.
Mar dambe, dhammaadkii 2009 iyo intii lagu jiray 2010, Open movilforum wuxuu ka shaqeynayay bilaabista API-yada cusub ee Spain. Markan, API-yada ayaa aad loogu jiheeyey ifafaalaha 'WEB 2.0'. Iyaga dhexdooda, waxay cadeeyeen:
Udiraya SMS / MMS.
Soo dhaweynta cinwaanka URL-ka SMS / MMS.
Fariin (SMS / MMS) 'jiid'.
Farriinta juqraafiyeed (SMS / MMS).
Shaki la'aan, API-yadaan fudud, waxaan kuusoo bandhigi karaa qalab taxane ah oo fududeeyay habka bixinta iyo baaritaanka labadaba barnaamijyada kujira aaladaha iyo kuwa isticmaalaya adeegyada shabakada Telefónica.
Open Movilforum wuxuu ahaa adeeg aad u horumarsan waqtigaas, aadna ugu horreeyay Spain, maadaama ay ahayd hindisihii ugu horreeyay ee bilaashka ah ee softiweerka ka shaqeeya shirkad Isbaanish ah. Wixii loogu talo galay waxay ahayd in la gaaro dhamaan SME-yada. Adiguna, ma ogtahay waxqabadkan ay bilawday Telefónica 2007? Su'aalahaaga noogu reeb faallooyinka, waanu ku farxi doonaa inaan ku aqrino.